EKE ABAGANA – hoo!haa!!
Ehee! Taata bu ahia eke, eke Awka, eke Ekwulobia, eke Abagana wdg. Bikonu, eke anyi ga-azu tata bu eke Abagana.Abagana di n’okpuru ochichi Njikoka na Anambra steeti. Otutu ndi mmadu si mpaghara di iche iche dika Awka, Amawbia, Enugwu-ukwu, Nimo, umunnachi,ifitedunu wdgz abia ahia. Enwe kwara odu di iche iche n’ime ahia dika odu ji , anu, azu, ogili na ede, Akwa wdgz.
Mana mu onwe m no ugbua na odu igba. Ndi Enugu na- akpo ya okpa, ndi Orumba na-akpo ya ntucha. Azuta kwara m otutu ihe di iche iche dika osikapa, agwa, akwukwo nri unere ma jioko wdgz. Igba mgbeke Ocha na ato asim gi enyena madu. Igba bu nnukwu ihe ahia umuaka ji asi “mama anata ayoyo”.
ORABASILI MARY IFEOMA
Previous Post: Ndi Fulani na-achị ehi awakpola ndi Adamawa
Ebili ji isi eje ọgụ
Ka anyi ga Eke EKWULOBIA ka anyi ga zuta Akwu anyi ga eji eshi ofe akwu. Ekwulobia di na Okpuru ochichi Aguata nke di na Anambra steeti. Ana esi ime Obodo di iche iche abia ahia ahu .ana erekwa otu ihe di iche iche dika Abacha eji abaa akpu, Unere, Oroma, ukwa nakwa otutu akwukwo Nri di iche iche. Ana erekwa osikapa agwa, ji, ede ,Ewu, Okuko na ihe ndi ozo. Obodo gbara Ekwulobia okirikiri gunyere Oko, Nanka, Ezinifite, Ekwulumiri, Isuofia
Tata bu ahia orie, enwere oye-agu Abagana, oye Nimo, orie oba Nsukka, orie ugwogo Nike wdgz. Nkem ga azu tata bu orie Ugwogo ka ga zuta garri, mmanu, mkpuru osisi, akwukwo nri dwgz. Garri dara ada n’ ubochi taa na ya bu ahia. Akpa garri a na ere puku naira iri, dara puku naira isii na okara taa. Mmanu nri a na ere otu ekpem nari naira ise bu nari naira ano n’ ubochi taa. Mkpuru osisi juputara ahia nyapu, nyapu e ji m anyam hu, madu akoghiri m nkea. Otutu ndi madu si kwa ebe di iche iche dika Nsukka, udi, Eziagu ,Emene na ebe ndi ozo were bia ahia ahu.mgbem zusiri abara m ugbo ndi Abakpa were lota. A kwurum otu nari naira na okara were gaa ma kwuo nari naira ano na nnata nkea bu I gosi na m zutara ihe nke ukwu. Biko si nu m nno na adighi mfe.